खेलकुद – Online Khabar 24
Aug82021 by admin adminNo Comments
बार्सिलोनाबाट बिदा हुँदै गर्दा मेसीले रू’दै के भने ? (भिडियो)
लियोनल मेसीले आइतबार बार्सिलोना क्लब र यसका समर्थकसँग भा'वपूर्ण बिदा लिएका छन् मेसी पत्रकार सम्मेलनका माध्यमबाट प्रस्तुत भए र यस क्रममा आफूलाई रो'क्न असफल रहे । मेसीले आँ'सु लुका'उन सकेनन् । उनले भने, ‘बार्सिलोनामा बिताएका समय केही राम्रा रहे, केही नराम्रा । तर बार्सिलोनाका जनताले मलाई गरेको माया उस्तै रह्यो । मलाई विश्वास छ,कुनै दिन फेरि बार्सिलोनामा फर्कने छु र फरक भूमिकामा हुनेछु ।’ उनले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा धेरै भन्न खोजेको तर भन्न नसकेको पनि बताए । उनले भने, ‘बार्सिलोना छा'ड्दै छु । तथ्यमा म अझै पनि विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । तर अहिले मेरो जीवन सधैंका लागि फेरिँ'दैछ र यो तथ्यलाई स्वी'कारेर अगाडि बढ्नु नै ठीक हुनेछ ।’ उनले बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नुमा समर्थकमाझ बिदा लिन पाएको भए त्यो निकै सु'खद् हुने पनि बताए । उनले थपे, ‘मैले २१ वर्ष बा'र्सिलोनामा बि'त...
Aug42021 by admin adminNo Comments
“मेस्सी म भन्दा राम्रा खेलाडी होलान् तर म मेस्सी भन्दा ह्यान्डसम छु”- रोनाल्डो
पोर्चुगिज कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो वा अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सी बीच को उत्कृष्ट खेलाडी भन्ने बहस कुनै नयाँ चीज हैन। र पोर्चुगिज कप्तान रोनाल्डोको पनि यो विवादमा आफ्नै राय रहेको छ। तर पिटर क्राउचका अनुसार रोनाल्डोको राय धेरै कारकले प्रभावित रहेको छ। कुनै समय रोनाल्डोको यस रायमा फुटबल पिचमा को उत्कृष्ट भन्ने कुरा नै सामिल थिएन। पूर्व लिभरपुल तथा इंग्ल्याण्ड स्टार पिटरले उनलाई रियो फर्डिनान्डले धेरै पटक सुनाएको कहानीको बारेमा खुलासा गरेका छन्। रियोले पिटरलाई बताएको कहानी अनुसार रोनाल्डो आफू मेस्सी भन्दा ह्यान्डसम भएकोमा निकै खुसी हुने गर्थे। क्राउचले भने,”रियो फर्डिनान्डले हामीलाई क्रिस्टियानो रोनाल्डोको बारेमा एउटा कहानी सुनाउने गर्थे। उनका अनुसार म्यानचेस्टर युनाइटेडमा हुँदा रोनाल्डो न-ग्न भएर ऐनाको अगाडी उब्भिने गर्थे र आफ्नो कपालमा हात राख्दै ‘आहा, म कति राम्रो छु’ ...
Jul242021 by admin adminNo Comments
ओलम्पिकमा पहिलो खेलमै नेपाल पराजित !
जापानको राजधानी टोकियोमा भइरहेको ३२औं ग्री'ष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदमा जुडो खेलाडी सोनिया भट्ट पहिलो खेलमै प'राजित भएकी छन् । केही बेरअघि सम्पन्न खेलमा भट्टले राउन्ड अफ ३२ अन्तर्गत महिला ४८ किलो तौल समूहमा रुसी खेलाडी इरिना डोल्गोभासँग हा'र व्यहोरेकी हुन् जुडोको विश्व वरियतामा नेपालकी १९ वर्षीया भट्ट १२७औं स्थानकी खेलाडी हुन् भने रुसकी डोल्गोभा विश्व वरियताको नवौं स्थानमा रहेकी छन् । भट्टले डोल्गोभासित इप्पोनको आधारमा पराज'य व्यहोर्नुपरेको हो । भट्टले सो खेलमा विपक्षी खेलाडसित १ मिनेट १६ सेकेन्डसम्म मात्र भिड्न सकिन् ।उनी वाइल्ड कार्डमार्फत टोकियो ओलम्पिकमा छनोट भएकी हुन् । भट्टले २०७६ मंसिरमा नेपालमै भएको १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) मा महिला ४८ किलोमुनिको तौलमा कास्य पदक प्राप्त गरेकी थिइन् । शनिवारै भएको सुटिङ स्पर्धामा नेपालकी कल्पना परियारले पनि प'राजय व्यहोर्नुपरेको थ...